पर्यटन र कृषिबाटै पुम्दीभुम्दीको समृद्धिः हिमलाल - NepalDut NepalDut
पर्यटन र कृषिबाटै पुम्दीभुम्दीको समृद्धिः हिमलाल
वैशाख २७ गते २०७९
पोखराको मुख्य बजारदेखि नजिक रहेर पनि विकासमा पछि परेको पोखरा २२ पुम्दी भुम्दीमा पर्यटन र कृषिको उतिकै सम्भावना रहेको छ । आज भन्दा करिब ५ दशक अघि सिद्धार्थ राजमार्ग जोडिएको पुम्दी भुम्दीमा दृर्ण इच्छा शक्ति भएको व्यक्ति नभएको कारण अझै पनि विकासमा पछि परेको स्थानियको गुनासो रहेको छ । लामो समय देखि सामाजिक क्षेत्रमा लाग्नु भएको व्यक्ति जसलाई मुख्यतः ४ राजनीतिक दलले समेत काध थापेर पोखरा २२ को वडा अध्यक्षमा विजयी गराउन लाग्नु भएको छ । आफ्नो घर परिवार भन्दा सामाजिक काम भने पछि पहिलोे प्रथामिकता दिने स्पष्ट वक्ता उतिकै उर्जाशिल व्यत्तित्व हिमलाल बराल हाल पोखरा २२ को यही वैशाख ३० गते हुने स्थानिय तहको निर्वानमा वडा अध्यक्षको प्रत्यासी छन् ।
पोखरा २२ तिलाहार निवासी बाबु दुर्गादत्त बराल, आमा रामकली बरालका जेष्ठ सुपुत्र अध्यक्षका प्रत्यासी बराल बी.ए.सम्मको अध्ययन गरी सक्नु भएको छ । २०४० देखि २०४८ साल सम्म शिक्षकको अनुभव सम्हाल्नु भएको बरालले २०५४ देखि २०५९ साल सम्म जिबिस कास्कीको सदस्य, २०६० देखि २०६८ सम्म शुक्रराज माविको अध्यक्ष, पुम्दीकोट भ्यू टावर निर्माण समितिका सल्लाहकार, २०७३ साल देखि हालसम्म पुम्दीकोट कोट विकास समितिका उपाध्यक्ष लगायतका विभिन्न संघ संस्थामा रहि पदीय दाहित्व बहन गर्दै आउनु भएको छ । यसैबिच, पोखरा २२ को आर्थिक विकास र समृद्धिमा तपाईको भुमिका कस्तो हुने छ भन्ने लगायतका बिषयमा समेटेर पोखरा २२ को अध्यक्षका प्रत्यासी हिमलाल बरालसंग गरिएको छोटो कुराकानीको केही अंश ।
गठबन्धनको साझा उमेदवारको रुपमा स्वतन्त्र उमेदवार पोखरा २२ को वडा अध्यक्षको प्रत्यासी भई रहदा हाल कस्तो अनुभव भई रहेको छ ?
म पोखरा २२ का ४ वटा राजनीतिक दलको समर्थमा स्वतन्त्र उमेदवारको रुपमा उपस्थित भएको छु । मैले जति वेला उमेदवारी दिए अरु राजनिती पार्टीहरुले सहयोग गर्नु भयो त्यो मेरो लागि एउटा प्रतिष्ठाको बिषय भयो । यहाँका ठुला सहितका राजनीतिक पार्टीहरुले साझा व्यक्तिको रुपमा यसलाई समर्थन गर्नु पर्छ भन्ने ढंगले मलाई विश्वास गर्नु भयो त्यो प्रति आभारी छु । जनता म प्रति निकै खुसि भएको मैले पाएको छु । विजयीको सुनिश्चितता जस्तै भएको छ ।
तपाईलाई पोखरा २२ पुम्दी भुम्दी बासीले किन मत दिने ?
पहिलो कुरा त म एउटा मात्र दलको व्यक्ति होइन म सवै बडा बासीको साझा उमेदवार हुँ । मैले कुनै समयमा नेकपा एमाले पार्टीमा लाग्दा होस वा सामाजिक कार्यमा उत्तिकै रुपमा योगदान दिदै आएको वडाबासीले पक्कै मनन गर्नु भएको छ होला । केही समय अघि म एमालेबाट प्रतिनिधि भएर तत्कालिन जिल्ला विकास समितिको सदस्य हुदा पनि मैले काम गरे, त्यस पछि शुक्रराज माविको अध्यक्ष भयर केही गरियो, हाल म पुम्दीकोट बिशाल महादेवको मुर्ति निर्माण अभियान अन्र्तगत गठन भएको पुम्दीकोट कोट विकास समितिको उपाध्यक्षमा रहेको छु । जनताका आवश्यकता हुने खानेपानी, बाटो लगायतको क्षेत्रमा मेरो उपस्थितीमा कस्तो कति परिवर्तन भएको छ त्यो मैले भन्दा आम पुम्दी भुम्दीबासीले नै मुल्याङकन गर्ने कुरा हो । जनताको सेवामा समपर्ण भएको र निरन्तर जनताको सेवामा लागेको हुनाले पुम्दी भुम्दीबासीको अमुल्य मत मलाई भुईकटहर चिन्हःमा हाल्नु हुने छ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु ।
घर दैलो कार्यक्रममा निस्कनु भयो होला साँच्चै जनताबाट के कस्ता सुझावहरु आए त्यसको सम्बोधन गर्न तपाईले कस्तो भुमिका खेल्नु हुन्छ त ?
विगतका जनप्रतिनिधिहरुले आम वडा बासीको सेवामा चुस्त दुरुष्त ढंगले काम गर्न नसेको कारण धेरै कुरा सुधार र परिवर्तन गराउन मलाई स्थानियको सुझाव आएको छ । ५ बर्षमा जनप्रतिनिधिहरुले गर्न सक्ने कामहरु समेत नहुदा जनतामा व्यापक असन्तुष्टि पैदा भएको मैले समेत महशुस गरेको छु । यस्तो अबस्थामा यहाँका बौद्धिक, राजनीतिक पार्टीहरुले समेत वडाको नेतृत्व गर्नु पर्यो भन्ने आसय व्यक्त गर्नु भएको कारण अनुरोध गर्नु भयो त्यसलाई मैले स्विकार्य गरे । विकास निर्माणमा हामी पछि पर्यौं, काम गर्न खाँचो छ हाम्रो क्षेत्रमा । पोखराका ३३ वटा वडाहरु मध्य २२ वडा विकासको हिसावले पछि परेको जनताको गुनासो रहेको थियो । यदि म वडा अध्यक्षमा विजयी भएमा जनताको मागलाई सके सम्म सम्बोधन गर्ने छु ।
पुम्दी भुम्दीको आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न अब तपाईको भुमिका कस्तो हुन्छ त ?
यदि यस निर्वाचनमा मेरो जित भएमा यस क्षेत्रको समग्र आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न पर्यटन र कृषिलाई पहिलो प्रथामिकता दियर अघि बढाउने योजना बनाउदै छु । हाम्रो विकासको पहिलो पूर्वाधारको आधार भनेकै पर्यटन हुनु पर्छ पर्यटन प्रबद्र्धन तथा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले केही संरचना निर्माण गर्ने त्यसमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन मिल्छ । पर्यटनलाई अब कृषिसंगै अघि बढाउनुु पर्छ ।
तपाईका अर्को निकटतम प्रतिदोन्दि कुनै समय एउटै पार्टी एमालेमा हुनुहुन्थ्यो, आज दुबै बिच प्रतिष्प्रर्धा गर्दै हुनुहुन्छ यसमा के भन्नुृ हुन्छ त ?
राजनीतिमा साथे भाई मात्र होइन कहिले काहिँ दाजु भाईहरु बिच विचारको राजनीतिक गर्न पनि प्रतिष्प्रर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । मैले घर परिवार भन्दा समाजकै हितको लागि बढी समय खर्चिएको छु । कुनै समय सायद मैले नै प्रकाश गुरुङ जस्ता धेरै व्यक्तिलाई मैले नै संगठित गरे । उमेरको हिसावले उहाँ मेरो दाजु हो, राजनीतिक हिसावले म नै दाजु हौंला । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिगमन बिरुद्ध काम गरे । अदालतले समेत प्रमाणित गरी सक्दा आफुले गरेको गलत प्रबृत्ति बिरुद्ध क्षमा याचना गर्न नचाहने र नगर्ने ब्यक्तिका बिरुद्ध म पनि एमालेबाट टाडिएको हुँ ।
मरो कुरा गर्नु हुन्छ भने म सामाजिक मान्छे हुँ, मैले कुनै व्यक्तिसंग दाज्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन, मैले व्यक्तिगत रुपमा आर्जन गरेको र मुख्य ४ दलको समेत समर्थन भएकोले मलाई राम्रो मत प्राप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । जनता समक्ष म परिक्षण(टेष्ट) गर्न पनि मेरो उमेदवार हो ।
गठबन्धनकै जनता समाजवादी पार्टीलाई किन समेटन्न सक्नु भएन त्यसले चुनावमा कुनै प्रभाव त पार्दै न ?
म स्वतन्त्र उमेदवारी दिएको मान्छे । मैले राजनीतिक पार्टीहरुलाई समेट्नु भन्दा मलाई समर्थन गर्ने कागेंस, माआबोदी केन्द्र, नेकपा एकिकृत समाजबादी, राष्ट्यि जनमोर्चाको समर्थन भएको छ । जसले समर्थन गर्न सकेन त्यो राजनीतिक कुरा हो, मैले समेट्ने कुरा होइन म त व्यक्ति हुँ । यसमा मेरो कुनै गुनासो छैन । यसमा मलाई खासै प्रभाव पर्दैन् ।
एमालेबाट टिकट पाउने हल्ला चलेको एकाएक टिकट अर्कोले पाए पनि स्वतन्त्र भएको भन्ने सुनिन्छ नी ?
एमालेले पहिला मलाई लड्न आश्वास दियो, एमालेसंग पहिलो, दोश्रो , तेश्रा, चौथोे चरणसम्म छलफल तथा वार्ता चल्यो यसमा एमालेको केही सर्त त्यसमा मेरो पनि केही सर्त मिल्न नसके पछि म आफ्नो बाटो लागेको हुँ । राजनीतिमा कसले कस्तो सर्त राख्यो भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्नेे कुरा पनि भएन्।
मतपत्र यसपाली केही झनझटीलो भयो भन्ने कुरा सुनिन्छ साच्चै मतदाता शिक्षा बढी आवश्यक हो यसमा तपाई के भन्नु हुन्छ ?
मत पत्र अप्ठेरो होइन, उमेदवारको हिसावले । धेरै उमेदवार भएको हिसावले केही कठिन भएको र गठबन्धनका धेरै उमेदवार भएकोले पनि मत हाल्ने केही झनझटीलो छ । धेरै राजनीतिक दलका पार्टीका चुनाब चिन्हः खोजेर चुनाब गर्नु पर्ने, त्यसमा पनि म स्वतन्त्र हालसम्म मतदान नगरेको भुईकटहर चिन्हः भयो । अहिले हरेक घरमा अशिक्षित व्यक्तिहरु सायद कमै छन यसमा हामीले पनि घर घरमा मतदान प्रशिक्षण गराएका छौं । केही बृद्ध बृद्धा हुनु हुन्छ उहाँँहरुलाई घर परिवारको सदस्यले प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ । मतदान गर्ने कुरा आफ्नो अभिमत जाहेर गर्ने कुरा हो, यसमा सोच विचार गरेर मात्र योग्य व्यत्तिलाई हामीले जिताउनु पर्छ अन्यथा ५ बर्ष पछुताउनु पर्ने छ । परिणाम हाम्रो पक्षमा आउछ यसमा ढुक्क छौं ।
संघियता पछि दोश्रो पटक हुन लागेको स्थानिय तहको निर्वाचनलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ ?
पुरोना तौर तरिका भन्दा हाल समय अवधि छोटो भयो, प्रचार सामाग्रिहरु पछिल्ला बर्षमा खासै टाँसेको पाइदैन, यसमा निर्वाचन कार्यालयले पनि निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्न जारी गरेकोले त्यसलाई बढी पालना गरेको पाइन्छ । पहिला वाल पेन्टिङ, पर्चा, पम्प्लेट, व्यानर धेरै अव्यबस्थित ढंगले धेरै ठाँउमा राखेको पाइन्थ्यो । पहिलाको तुलनामा धेरै सुधार हुदै आएको छ । अझ थप कम खर्चिलो होस भन्ने हाम्रो भनाई छ ।
आम मतदातालाई मेरो अनुरोध पोखरा २२ को परिवर्तको पक्षमा राम्रो र योग्य व्यक्तिको छनौट गर्नु होला । हामीले अहिले वडाको विकासलाई प्रथामिकता दियर घोषणा पत्र समेत जारी गरेका छौं सम्भव भए त्यो अध्ययन गरेर भए पनि मेरो नेतृत्वको टोलीलाई अत्याधिक बहुमतले बिजयी गराइ दिनुहुने छ भन्ने म पूर्ण विश्वास व्यक्त गर्दछु । हामीले जारी गरेको घोषणा पत्र जित पश्चात लागु गर्ने छौं । सुनलाई कसी लागे जस्तो जनता माझ म एक सामाजिक व्यक्ति तपाईहरुको सामु परिक्षण गर्न आएको छु साच्चै राम्रो ठानेर मत दिएमा ५ बर्ष तपाईहरुकै पक्षमा जनमुखी काम गर्ने छु । आफ्नो विवेक प्रयोग गरी गोप्य मतदान प्रयोग गर्न पुनः आग्रह गर्दछु। पोखरा २२ को अन्य सदस्यका प्रत्यासीमा कागं्रेसकी लक्ष्मी बराल महिला सदस्य, माओबादी केन्द्रकी कल्पना रसाइली दलित महिला सदस्यमा, खुल्ला सदस्यमा चेतभत्त बराल र हुम बहादुर गुरुङलाई समेत जिताउन तपाईको यस मिडिया मार्फत आग्रह समेत गर्दछु ।